5 Yekushambadzira Kushambadzira Inoita Yako Brand Yezvinodiwa Kugamuchira | Martech Zone
5 Yekushambadzira Kushambadzira Inoita Yako Brand Yezvinodiwa Kugamuchira
Mugovera, July 25, 2015 Mugovera, July 25, 2015 Douglas Karr
Vafambi vezvikepe yakatanga saiti munaKurume wa2015 izvo zvakakonzera kukwidziridzwa kwe12% kubva kubhaisikopo kubva kumidziyo yefoni / piritsi mumavhiki maviri ekutanga, kuwedzera kwe3% mumari yepamhepo mukati uye kuwedzera kwe140% pamari yepamhepo. Ivo vakapedza izvi kuburikidza neye saiti yakavandudzwa mafambiro ezvinyorwa, mifananidzo ine simba uye yakareruka nzira yekubhuka - vachipinda munzira dzedhijitari nevafambi.
Kuti uvandudze rwendo rwekufambisa kune webhusaiti yayo, wedzera shanduko uye ununure yakanaka brand ruzivo zvinoenderana nekambani yemazuvano emhando yepamusoro, Celebrity Cruises yakashanda nevatengi vane ruzivo rwetekinoroji SDL uye kubvunzurudza kwedhijitari Kuvaka Zvivako.
Mhando dzepasi rose dzekushambadzira dzinofanirwa kugutsa zvido zvevafambi nevashanyi vari vaviri mumunhu uye pamhepo, mune chaiyo-nguva uye pamitauro yakawanda. Izvi zvinoreva kuverengera isina musono, chiitiko chinowirirana pamatanho nekudyidzana. Kuti vabudirire izvi, vashambadziri vanofanirwa kugadzirisa marongero avo sehunhu hwevatengi uye zvavanofarira zvichichinja, vachichengeta aya mashanu mafambiro edhijitari mupfungwa. Paige O'Neill, CMO, SDL
Iyo indasitiri yekufambisa yepasirese ikozvino yakatarisana nedambudziko rakasarudzika rekugutsa zvido zvevafambi vari vese uye online, mune chaiyo-nguva uye nemitauro yakawanda. Kuti usvike uye upfuure zvinofarirwa nemufambi, mabrand anofanirwa kugadzira nzira yekunyanyisa nekunzwisisa anotevera mafambiro mashanu ari kuumba ramangwana rezve chiitiko chedigital.
5 Kufamba Kwemaitiro Kuumba iro Ramangwana reDhijitari Chiitiko
Kuwedzeredzwa Kwemagariro - Vafambi vakanyarara havasisiri kutaura kumusoro uye vari kutaura zvinonetsa online vasina kutaura izwi. Vari kushandisa maturusi edhijitari uye havachadi kubata kwevanhu kubata
Kugadziriswa kwemunhu Kubva paKufarira - Vafambi vanoremerwa vanokurirwa nesarudzo dzepamhepo. Vatengesi vanofanirwa kuendesa yakanangwa, yakasarudzika ruzivo kune vafambi vanoshandisa data uye curate iri nani CX
Dhijitari Chiitiko Optimization - Kutaridzika ndiwo mutauro mutsva wenguva yedhijitari. Vatengi vanokoshesa maonero evamwe kupfuura chero kushambadzira kunotaura
Kukanganiswa Kwenhare - Uber uye AirBnB mienzaniso yevanokanganisa vakashanduka kuita zvishandiso zvekubatana.
Dhijitari Kuzvishandira - Nhasi 39% yeMillennials vanopa kwavo kufamba vachishandisa metasearch pane echinyakare maInternet travel agency (OTAs) kana brand saiti yekufambisa zvinoenderana nevanoongorora veadhijitari. Mavara ekufamba anofanirwa kufunga pamusoro peyekushambadzira zvinyorwa uye chinhu mune chinodiwa chekutaurirana mune yetsika mamiriro kuendesa pane epasirese vafambi tarisiro.
Zviratidzo Zvemukati Zvinotyaira Kunzwisisa, Kubatanidzwa uye Shanduko paSocial Media
Wako Marketer Aripo Kuti Akubatsire Iwe
Jul 28, 2015 na4:55 PM
Hi, chinyorwa chikuru, ndatenda!
iwe unofunga kuti ndezvipi zvinhu zvitatu zvakanyanya kukosha kune itsva yekufambisa bhucha app nhasi?